Kedu ihe onye nwere ụgwọ ga-eme? Nkọwapụta nke ụbụrụ ego
Malite mgbazinye ego Wiki Mietschuldner
Kedu ihe bụ Mietschuldner: Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ịtọzinye ego
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na ndị ọzọ na Germany na-atụbiga uche ókè. Ụgwọ n'onwe ya abụghị ihe iyi egwu maka ọrụ gị, ma ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ, ị nwere ike ịfu ụlọ gị ma ghọọ onye na-enweghị ụlọ. Dịka onye ji ụgwọ mgbazinye, ọ na-esikwa ike taa ịbanye n'ime ụlọ ọhụrụ. Maka nke a, a ghaghị izere ụgwọ mgbazinye ọ bụla ụgwọ. Ọ bụrụ na ị nwere ụgwọ ịgbazinye ụgwọ, ị ga-eme ngwa ngwa, n'ihi na ichere ga-eme ka ọnọdụ gị ka njọ.
1 Akwụghị ụgwọ ịgbazite? Kedu oge ị ga-ewere dị ka onye ji ụgwọ ịgbazinye ego:
1.1 Kedu ụgwọ nke ịgbazinye ego?
2 Onye nwe ụlọ ahụ nwere ike ịkwụsị mgbazinye ego n'enweghị ọkwa?
2.1 Ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọnga ọnwa abụọ, ọ ga-adị oké egwu maka gị
3 Ya mere, ị ga-emeghachi dịka onye ji ụgwọ ịgbazinye ego:
4 Kagbuo kagbuo:
5 Njikọ njikọ:
Akwụghị ụgwọ ịgbazite? Kedu oge ị ga-ewere dị ka onye ji ụgwọ ịgbazinye ego:
Site na itinye ikike nkwekọrịta nke ụlọọrụ 1.9.2001, a ghaghị akwụ ụgwọ ụlọ tupu ụbọchị nke atọ nke ọnwa. Ọ bụrụ na ị gaghị emezu oge a, iwu akwadolarị gị ka ị rụọ ọrụ dịka onye ji ụgwọ ụgwọ. Otú ọ dị, ịkwụ ụgwọ tupu ụbọchị nke atọ ga-ede ede na nkwekọrịta mgbazinye. Ozokwa, ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ naanị ụgwọ nke ịgba ụgwọ ahụ, ọ ga-ewute gị onye nwe ụlọ.
Kedu ụgwọ nke ịgbazinye ego?
O nweghi oke zuru ezu ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ naanị ego na nkwekọrịta mgbazinye, n'ihi na ụgwọ ụlọ ahụ na-agụnye ụgwọ ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ ọrụ dịka mkpofu mkpofu na mmiri. Ị ga-edozi ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ kpo oku ma ọ bụ ọnụego kwụyere na ọnụego gị kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ịkwụghị ụgwọ ịgbazinye zuru ezu, ị kwadoro ụgwọ ego ịgbazinye ego.
Onye nwe ụlọ ahụ nwere ike ịkwụsị mgbazinye ego n'enweghị ọkwa?
Ọ bụrụ na ị bụ naanị na ndabara site na ịgbazinye ego kwa ọnwa, ị kabeghị egwu na nkwụsị ozugbo. Otú ọ dị, onye nwe ụlọ nwere ike ịkọsara gị nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-egbu oge na ihe karịrị otu ugwo ọnwa maka ihe karịrị otu ọnwa. N'okwu a, onye nwe ụlọ ga-agbaso oge ọkwa iwu, nke na-abụkarị ọnwa atọ. Ezigbo ihe ọmụma: Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-agbanwefe ego gị mgbe niile, a ga-akwụsị ọrụ gị. Otú ọ dị, onye nwe ụlọ gị nwere ikike, ma ọ bụrụ na ọ dọrọ gị aka ná ntị na ide.
Ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọnga ọnwa abụọ, ọ ga-adị oké egwu maka gị
Ọ bụrụ na ịnọghị na ndabara dịka onye ji ụgwọ ịgbazinye ụgwọ ụgwọ ọnwa abụọ, onye nwe ụlọ nwere ike ịkwụsị n'enweghị ọkwa. Nkwụsịtụ na-enweghị ọkwa ọ ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ ezumike ahụ n'ụzọ zuru ezu ma bụrụ nke na-ezighị ezi na ụbọchị ịkwụ ụgwọ ụbọchị abụọ karịa otu ugwo ọnwa zuru ezu. I kwesiri icheta mgbe nile na ihe mere onwe gi ji egbu oge, dika njo oru na mberede, wdg, enweghi ike ime ka nchupu ahu ghara idi irè. Naanị n'ọnọdụ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'amaghị ama na ụlọ ọgwụ ma ya mere enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ gị, ụlọikpe nwere anya.
Ya mere, ị ga-emeghachi dịka onye ji ụgwọ ịgbazinye ego:
Echerela ruo mgbe oge agwụwala, ma kpọtụrụ onye nwe ụlọ ozugbo ị ghọtara na ị gaghị akwụ ụgwọ ụlọ ma ọ bụ na ị gaghị ezu. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ na-ahapụ onwe ha ikwu okwu ma nye gị ụgwọ a kwụrụ ụgwọ ma ọ̄ bụ ọbụna ụgwọ ịkwụ ụgwọ. I kwesiri ịghọ onye nkwụnye ụgwọ maka ọdịmma onwe gị, dịka ọmụmaatụ, enweghi ọrụ, ụlọ ọrụ ọdịmma mmadụ nwere ike inyere gị aka ma weghaara ọrụ ị na-akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na ị, dịka onye ji ụgwọ ịgbazinye ego, dozie ụgwọ gị n'ime ọnwa abụọ mgbe e nyechara gị aka, njedebe ahụ agaghị adị. Ma, ị nwere ike iji ikikere a kwa afọ abụọ. Ọ bụrụ na ị natalarị ọkwa nke nkwụsị dịka onye ji ụgwọ ụgwọ n'ime afọ abụọ gara aga wee kwụọ ụgwọ ụgwọ ịgbazinye ego na retrospect, njedebe ahụ ka dị.
Isiokwu bu nke anke
Isiokwu ọzọpromissory ndetu